Waare: Xildhibaankii Kursigiisa kala cararay dadkiisa ma soo noqon doono | Keydmedia
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Madaxweynaha HirShabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa khudbadii shalay ka jeediyay xeritaanka Shirkii Dhuusamareeb, ayuu digniin ugu diray Xildhibaanada Gollaha Shacabka, ee doonaya in Kuraasta ay ku fadhiyaan u wareejiyaan degaanno kale, oo aan horey loogu soo dooran.
“Xildhibaankii kursigiisa dhabarka saartay ee kala cararay dadkiisa, ha ogaado, hana ku bishaareysto ma soo noqon doono, maadaama ayadoo aan doorashaba dhicin ayuu muujiyey in dadkiisu uusan ku kalsoonayn” ayuu yiri Madaxweyne Waare.
Waare ayaa sheegay in Xildhibaanada Gollaha Shacabka ay yihiin kuwii loo doortay inay madax qaranka la xisaabtamaan, balse iyagu ay horseed u yihiin musuq-maasuqa dalka ka jira maadaama ay kuraastii shacabka ugu fadhiyeen ay ls-lahaysiiyeen, iyadoo markii horena qaab musuq-maasuq iyo cod iibsasho ku yimaadeen.
Waxaa socda dood ah in Xildhibaanada u wareejiisan karaan degaan doorashadooda goobo kale, oo aan ahayn meelihii lagu soo doortay 2016, waxaana laga digayaa in arintaas ay dhibaato horleh u dalka, hadii aan hadda laga hortagin.
Mahad Cabdalla, gudoomiyaha ku xigeenka 2aad ee Gollaha Shacabka iyo Xildhibaanno dhowr ah, ayaa kamida xubnaha doonaya in kursiga aan lagula tartamin, iyagoo muujiyay in aaney ku mataleynin dad iyo dal toona, oo naftooda Xildhibaan u yihiin.
0 Comments Topics: dhuusamareeb gollaha shacabka hirshabeelle waare